APIE ၏အပိုင်းအစ - သြဂုတ် ၂၀၁၈ သတင်းလွှာ - Austin Partners in Education
မေလ 28, 2018
ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Cathy Jones ထံမှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ စာသင်နှစ်မှကြိုဆိုပါသည်။
ယခုနှစ်တွင် APIE သည်ဆler္ဌမတန်းအကြို Pre-AP သင်္ချာကျောင်းသားများ၊ Sadler-Means, Dobie နှင့် Martin အလယ်တန်းကျောင်းများရှိအeight္ဌမတန်း Algebra I ကျောင်းသားများနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းသစ်ကိုစတင်မည်။
ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ Austin ကျောင်းသားများကိုသင်္ချာစာသင်ခန်းနည်းပြနည်းပြအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းအားဖြင့်ယနေ့ဖြစ်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ Andrea Panter ကိုဆက်သွယ်ပါ apanter@austinpartners.org.
လာမည့်ကျောင်းနှစ် | APIE နှင့်အတူပျော်ရွှင်နာရီ
APIE ၀ န်ထမ်းများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့တွင် APIE သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နှစ်ပတ်လည်ပျော်ရွှင်မှုနာရီကို Austin Eastciders တွင်နံနက် ၅း၀၀ မှ ၇း၀၀ နာရီအထိစီစဉ်ထားသည်။ ပထမဆုံး guests ည့်သည် ၂၅ ယောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုသောက်လိမ့်မယ်။ လာမည့်ပြန်လာသည့်စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းအသစ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကြိုဆိုသည့်အတွက်စာသင်နှစ်သစ်ကိုငါတို့နှင့်အတူကျင်းပပါ။
၀ န်ထမ်းကျန်းမာရေးနှင့်ကျန်းမာရေး သာ။ ကွီးမွတျ Austin စီးပွားရေးဆုပေးပွဲ 2018
APIE သည်သြစတြီးယားစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှပေးအပ်သည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် Austin Business Awards အတွက်အမျိုးအစား ၃ ခုဖြင့်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။ Go 365 အစီအစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးချွန်သောပါဝင်မှုအတွက် Ascension Seton Employee Wellness Award ကိုကျွန်ုပ်တို့အိမ်သို့ပြန်ယူခဲ့သည်။
စေတနာ့ဝန်ထမ်းမီးမောင်းထိုးပြ | Hailey Kim
မူလက Texas, Dallas မှ Hailey Kim သည် UT Austin တွင်သွားဆရာဝန်ဖြစ်သည်။ သူသည် APIE နှင့်အတူ ၂၀၁၇ ဆောင်း ဦး ရာသီတွင်သင်္ချာစာသင်ခန်းနည်းပြအနေဖြင့်စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
ကလေးများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရခြင်း၊ ကျောင်းသားများအားကူညီခြင်းနှင့်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ပညာရေးကိုထိန်းချုပ်ရန်အားပေးခြင်းကိုကျွန်တော်နှစ်သက်သည်။ APIE နှင့်အတူစေတနာ့ဝန်ထမ်းခြင်းသည်ကျောင်းသားများအားစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကလေးတွေ။ သူတို့ကတကယ်ကိုစိတ်အားထက်သန်တယ် အယူအဆတစ်ခုကိုသူတို့သဘောပေါက်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်သူတို့သည်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားမိကြသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်၎င်းသည်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်သူတို့ကိုကျွန်ုပ်အားသင်ကြားပေးခြင်းနှင့်ပြproblemsနာများကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းရန်ကူညီပေးခြင်းကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။
သုံးခုမှလေးတန်းအတွင်းအုပ်စုများနှင့်သင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေစဉ်ကျောင်းသားများ၏ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ကွဲပြားမှုကိုဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းရန်စိန်ခေါ်ချက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျောင်းသား၏အခြားအုပ်စုများထက်နှေးကွေးစွာရွေ့လျားခြင်းကိုစိတ်ဓာတ်ကျစေနိုင်သည်။ သို့သော်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ရွယ်တူချင်းများမှသဘောတရားတစ်ခုနှင့်အတူကူညီခြင်းသည်၎င်းတို့အတွက်လည်းအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ သူတို့အတူတူအလုပ်လုပ်ရတာကြိုက်တယ်။
ဟုတ်တယ်။ ဤကလေးများနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်လေ့လာသမျှတွင်ကြိုးစားအားထုတ်ရန်ကျွန်ုပ်အားတကယ်အားပေးသည်။ သူတို့လေ့လာနေသည့်အရာသို့သူတို့များစွာကြိုးစားအားထုတ်ကြသည်ကိုမြင်ရသည်။ ငါသူတို့ကိုပြောမယ်၊ အမှားတွေကနေသင်နေသမျှကာလပတ်လုံးကျရှုံးဖို့အဆင်ပြေပါတယ်။ သွားနှင့်သွားများအနေဖြင့်ကလေးများနှင့်ဆက်လက်အလုပ်လုပ်လိုသည်။ ငယ်ရွယ်သောကလေးငယ်များအတွက်အားပေးမှုရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးပညာရေး၏အရေးပါမှုကိုသူတို့လေ့လာသိရှိလာသည်နှင့်အမျှသူတို့ကိုအားပေးစွမ်းဆောင်နိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။
၎င်းသည်အထိန်းနှင့်ကျောင်းသားအတွက်အလွန်ကောင်းသောအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။ ကလေးများသည်သင်နှင့်သင့်ရွယ်တူချင်းများထံမှ ပို၍ တစ် ဦး ချင်းအာရုံစိုက်ခြင်းနှင့်သင်ယူခြင်းများရရှိသည်။ သင်တို့သည်လည်းဤကလေးများအနေဖြင့်သင်ယူပါတယ်။ သငျသညျပိုပြီးစိတ်ရှည်ခြင်းနှင့်နားလည်မှုဖြစ်သင်ယူကြသည်။ ကျောင်းသားများစွာသည်ကျောင်းပြင်ပ၌အခြားရုန်းကန်မှုများကိုကြုံတွေ့ရပြီးထိုအချိန်တွင်ကျောင်းသည်သူတို့၏အရေးအကြီးဆုံးကိစ္စမဟုတ်ပါ။ သို့သော်ပညာရေးသည်အနာဂတ်ကိုပိုမိုအောင်မြင်ရန်သူတို့ကိုတက်စေနိုင်ကြောင်းသူတို့ကိုအသိပေးခြင်းသည်အားရှိစရာပင်။
2019 Austin Marathon, Half-Marathon နှင့် 5K တို့ကိုဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်th, 2019. မှတ်ပုံတင်ခြင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိသည်, ငါတို့အဖွဲ့သည်သင်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် နောက်ဆုံးသတင်းများ၊ အတွင်းလူပုံပြင်များနှင့်စျေးနှုန်းအသိပေးချက်များကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအတွက် Austin Partners In Education on တွင်လေ့လာပါ Facebook, တွစ်တာနှင့် Instagram.
Prevရှေ့APIE ၏တစ် ဦး ကအချပ်: ဇွန်လ 2018 သတင်းလွှာ
နောက်တစ်ခုAPIE ၏တစ် ဦး ကအချပ်: အောက်တိုဘာလ 2018 သတင်းလွှာနောက်တစ်ခု